Laba qadaadiic euro oo lagu xuso suuqa | Dhaqaalaha
Laba qadaadiic oo Euro ah
Susana Maria Urbano Mateos | | Siyaasadda lacagta
Uruurinta walxaha had iyo jeer waxay ahayd mid ka mid ah hiwaayadaha par heer sare, laakiin sidoo kale ganacsi abuuri kara dakhli fara badan oo dadka khibradda u leh maadada. Adduunyada dhexdeeda, mid ka mid ah waxqabadyada ka dhex muuqda kuwa kale waa ururinta qadaadiic xuska, kuwaas oo qaarkood lagu qiimeeyay malaayiin dollar.
Dabcan Ma jiraan qadaadiic badan oo gaari kara qiimahaas oo kale, laakiin shaki kuma jiro inay ka kooban yihiin suuq ballaaran. Mid ka mid ah tusaalooyinka ugu xiisaha badan ee arrintan la xiriira waa kiiska laba euro oo shilimaad xus ah.
1 Maxay yihiin labada qadaadiic ee lagu xasuusto euro?
2 Laba qadaadiic euro oo lagu xuso Spain
2.1 2.- Sannad-guuradii 50aad ee heshiiskii Rome.
2.2 3.- Sannad-guuradii 10aad ee Midowga Dhaqaalaha iyo Lacagta.
2.3 4.- Dhaxalka Adduunka - Xarunta Taariikhiga ah ee Córdoba.
2.4 5.- Dhaxalka Adduunka - Patio de los Leones de Granada.
2.5 6.- Dhaxalka Adduunka - Burgos Cathedral.
2.6 7.- Toban sano oo Euro ah.
2.7 8.- Dhaxalka Dunida - Monastery of San Lorenzo del Escorial.
2.8 9.- Goobta Hidaha Adduunka - Park Güell.
2.9 10.- Ku dhawaaqida Boqornimadiisa Felipe VI.
2.10 11.- Dhaxalka Adduunka - Godka Altamira.
2.11 12.- Sannad-guuradii XXX ee Calanka Yurub.
2.12 13.- Dhaxalka Adduunka - Biyo mareenka Segovia.
2.13 14.- Dhaxalka Adduunka - Kaniisada Santa María del Naranjo.
2.14 15.- Dhaxalka Adduunka - Magaaladii Hore ee Santiago de Compostela.
2.15 16.- Sannad-guuradii 50aad ee King Felipe VI.
3 Lacagta lagu xuso Eurozone ee si wadajir ah loo soo saaro
4 2007 lacagta wadaagga ah
5 2009 lacagta wadaagga ah
6 2012 lacagta wadaagga ah
7 2015 lacagta wadaagga ah
Maxay yihiin labada qadaadiic ee lagu xasuusto euro?
Shilimaadkani waxay ahaayeen la qabtay ilaa 2004 oo waxaa lagu gartaa xaqiiqda ah in mid ka mid ah wejiyada shilimaadyada la sheegay lagu beddelay ujeeddo xusuus ah, sidaasna loogu dabaaldegayo, daqiiqado muhiim u ah taariikhda dalkaas ama Midowga Yurub.
Qadaadiicdu waa laba yuuro waana qandaraas sharci ah dhamaan wadamada xubnaha ka ah euro-da. Lacagtii ugu horreysay ee lagu xuso waxaa soo saaray Griiga, munaasabadda Ciyaaraha Olombikada ee Athens 2004.
Dabcan, shilimaadkani waa daabacaadyo waqti-xaddidan oo gaar ah, marka ma sii joogaan suuqa muddo dheer, sabab ku filan oo ay u kordhiyaan qiimahooda si isdaba joog ah waqti ka dib.
Ilaa Diisambar 31, 2017, wadar ahaan 295 qadaadiic xuska laba euro ayaa la soo saaray.
Dawlad kasta oo xubin ka ah Midowga Yurub way iska yareyn kartaa lacagteeda laba-euro-ga lagu xuso, si kastaba ha noqotee, xilligan, tirada ugu badan ee shilimaadka xuska ah ee waddan kasta soo saari karo waa laba qadaadiic sanadkiiba ugu badnaan, ama saddex marka laga hadlayo In si wadajir ah Arrinta waxaa loo soo bandhigayaa Midowga Yurub, oo loo fuliyo si loogu dabaaldego sannad-guurada muhiimadda gaarka u leh beeshan siyaasadeed, marka laga reebo waxaa la soo bandhigaa oo keliya afar jeer illaa maanta (2007, 2009, 2012 iyo 2015).
Sida qaabdhismeedka guud ee dhammaan shilimaadka la shiilay, waxay ku muujinayaan ujeeddo guud dhinaca qaranka, isla taas oo magaca dalka soo saaray uu ka muuqdo.
Sidoo kale, astaanta munaasabadda xuska ayaa sidoo kale lagu soo bandhigaa, luqadaha ama luqadaha ay ka soo kala jeedaan. Waa in la ogaadaa in si ka duwan waxa ku dhaca waraaqaha lacagta lagu shubo, lacagta shilinka 'euro' ay wali masuul ka tahay waddan kasta oo aan ahayn Bangiga Dhexe ee Yurub.
Laba qadaadiic euro oo lagu xuso Spain
Hal sano kadib markii la sii daayay lXNUMXaad daabacaadda xusuusta ee labada lacagta Euro ee Giriigga, Nooca ugu horeeya ee xuska lacagtaani ayaa laga bilaabay Spain, munaasabada IV Centenary ee daabacaaddii ugu horreysay ee "The the hidalgo hidalgo Don Quixote de la Mancha".
Tan iyo markaas iyo ilaa maanta, wadar ah 16 qadaadiic xusuus ah oo laba euro ah Spain, kuwaas oo u adeegay xusuusin gaar ah oo ku saabsan sanad-guurada agagaarka dhacdooyinka muhiimadda gaarka ah u leh taariikhda Isbayn.
Hoos waxaan ka arki karnaa noocyada kala duwan ee laga sii daayay dalka tan iyo markii ugu horeysay ee la sameeyay 2005.
1.- IV boqol-sano jir ah daabacaaddii ugu horreysay ee shaqada Miguel de Cervantes "The hidal xariifnimada Don Quixote de la Mancha".
Lacagtan ayaa la bilaabay 2005 iyadoo wadarta guud ee siddeed milyan oo cutub ah.
2.- Sannad-guuradii 50aad ee heshiiskii Rome.
Lacagtan ayaa markan u adeegtay sidii lacagtii ugu horreysay ee lagu xuso si wada jir ah ula bixinta inta kale ee dalalka Midowga Yurub, sidaas awgeedna loogu dabaaldegayo taariikh muhiim ah oo ay wadaagaan dhammaan xubnaheeda. Waxaa la bilaabay 2007, waxayna soo saartay arrin siddeed milyan oo shilin ku taal Spain.
3.- Sannad-guuradii 10aad ee Midowga Dhaqaalaha iyo Lacagta.
Tani waxay ahayd lacagtii labaad ee si wada jir ah loo soo saaro waddammada Midowga Yurub, laba sano uun ka dib marka lacagta loo sameeyo sannadguuradii heshiiskii Rome. Waxaa la bilaabay 2009 iyada oo la soo saaray arrin siddeed milyan oo shilin ku taal Spain.
4.- Dhaxalka Adduunka - Xarunta Taariikhiga ah ee Córdoba.
Tani waxay ahayd lacagtii labaad ee loo abuuray gaar ahaan Spain. Waxaa la soo saaray 2010 iyadoo la soo saaray afar milyan oo nuqul.
5.- Dhaxalka Adduunka - Patio de los Leones de Granada.
Sannad ka dib, lacagta soo socota ee laba-euro-ga ah ayaa loo sameeyay Spain, 2011, oo leh arrin afar milyan oo shilin ah.
6.- Dhaxalka Adduunka - Burgos Cathedral.
Lacagta xigta ee xuska ka timaada Isbaanishka waxaa la bilaabay 2012, oo la mid ah arrin afar milyan oo shilin ah.
7.- Toban sano oo Euro ah.
Munaasabadan dabaaldeggan awgeed, laba qadaadiic oo xuska laba euro ah ayaa markii ugu horreysay laga sameeyay Spain, sanadkii 2012. Noocani wuxuu u dhigmaa lacagta saddexaad ee la bilaabay iyadoo lala kaashanayo Midowga Yurub.
8.- Dhaxalka Dunida - Monastery of San Lorenzo del Escorial.
Sannad kadib, 2013, ayaa lacag kale loo sameeyay Spain, iyada oo sida caadiga ah la soo saaray afar milyan oo nuqul.
9.- Goobta Hidaha Adduunka - Park Güell.
Sannadkii xigay, 2014, lacag cusub oo lagu xuso ayaa loo sameeyay Spain, laakiin markan, oo soo saartay lacag dhan 8 oo qadaadiic ah.
10.- Ku dhawaaqida Boqornimadiisa Felipe VI.
Waxaa la soo saaray 2014 waxayna soo saartay arrin 8, 100,000 oo bir ah.
11.- Dhaxalka Adduunka - Godka Altamira.
Lacagtan. Sannadkii 2015, laba lacagood oo xusuus ah ayaa mar kale la bilaabay. Tani waxay u dhigantaa tii aan u sameeyay Spain oo soo saartay lacag dhan 4 oo qadaadiic ah.
12.- Sannad-guuradii XXX ee Calanka Yurub.
Arrinta oo ah 4.300.000 oo qadaadiic ah, lacagtaan oo sidoo kale la bilaabay 2015 waxay u dhigantaa arrintii ugu dambeysay iyadoo lala kaashanayo waddamada Midowga Yurub.
13.- Dhaxalka Adduunka - Biyo mareenka Segovia.
Lacagtan ayaa la soo saaray sanadkii 2016, waxaana loo soo bandhigay arrin dhan 3.400.000 oo qadaadiic ah.
14.- Dhaxalka Adduunka - Kaniisada Santa María del Naranjo.
Dabaaldegga munaasabaddan, kaliya 500,000 oo qadaadiic ah ayaa la soo saaray 2017, taas oo ka dhigaysa qaybtan mid ka mid ah kuwa ugu dhifka yar.
15.- Dhaxalka Adduunka - Magaaladii Hore ee Santiago de Compostela.
300,000 oo arrimood sannadkan, lacagtani waa tii ugu yaraa ee lacagta Euro ee lagu xuso abid abid oo ay soo saarto Spain.
16.- Sannad-guuradii 50aad ee King Felipe VI.
Tani waa lacagtii ugu dambeysay ee xuska ilaa taariikhda laga sameeyo dhulka Isbaanishka, sidoo kale waa mid ka mid ah kuwa ugu dhifka yar maadaama ay si dhib yar u haysato arrimaha 400,000.
Lacagta lagu xuso Eurozone ee si wadajir ah loo soo saaro
Ilaa hadda, wadar ahaan afar qadaadiic xus ayaa si wada jir ah u soo saareen waddamada xubnaha ka ah Midowga Yurub, kuwaas oo lagu sii daayay taariikhaha soo socda:
2007 lacagta wadaagga ah
Noocii ugu horreeyay ee lagu xuso guud ahaan waxaa la bilaabay Maarso 2007, munaasabadda konton guuradii heshiiskii Rome. Sida la wada ogsoon yahay, heshiiskii Rome waa sida loo yaqaan labadii heshiis ee dhaliyay abuuritaanka Midowga Yurub sanadkii 1957. Dalalkii ugu horreeyay ee ka tirsan beeshan siyaasadeed waxay ahaayeen waddammadii Federaalka Jarmalka, Beljam, Faransiiska, Luxembourg, Talyaaniga, iyo Nederland. Lixdaan xubnood ee hore waxay aasaas u yihiin aasaaska waxa hadhow noqonaya hay'ad siyaasadeed oo weyn oo wadarta wadammada xubinta ka ah 28 ay yihiin.
Natiijo ahaan, saxiixyada 6da dowladood ee aasaaska u ahaa heshiiskii Rome waxaa lagu muujiyey xardhidda lacagtaan. Qeybta hore waxaad ku arki kartaa naqshad ay dhiirrigelisay laamiga Piazza del Campidoglio ee Rome. Sababtoo ah lacagtani waxay u dhigantaa waddamada Eurozone, moodelku wuu ku kala duwanaan karaa magaca iyo luqadda waddanka laga soo saaray. Faahfaahin dheeraad ah, giraanta dibadda ee qadaadiicdu waxay ka kooban tahay laba iyo toban xiddigood oo ka tirsan Midowga Yurub.
2009 lacagta wadaagga ah
Lacagtaani waxaa loo soo saaray iyada oo qayb ka ah Sannad-guuradii XNUMXaad ee Midowga Lacagta Yurub, taas oo ahayd meeshii euro ay ka soo ifbaxday sida lacagta tixraaca bulshada iyo aasaaska Bangiga Dhexe ee Yurub.
Naqshadeynta lacagtaan waxaad ku arki kartaa qof bini'aadam ah oo ku yaal bartamaha, oo gacantiisa bidix ay ku dheereysan tahay calaamadda euro. Laba iyo tobanka xiddigood ee Midowga Yurub waxaa laga arki karaa hareeraha naqshadeynta taajka wareega taajirka ah ee lacagta.
2012 lacagta wadaagga ah
Qaabkan waxaa loo soo saaray si loogu dabbaaldego sannad-guurada XNUMXaad ee wareejinta lacagta birta ah ee Euro iyo qoraalada. Naqshadeynta waxaa lagu doortay cod, halkaasoo ku guuleystaha laga soo saari doono dhammaan waddamada aagga euro.
Naqshaddan waxaa loo raadiyay in lagu xuso oo lagu muujiyo sida euro uu u noqday jilaa caalami ah oo dhab ah maaddaama ay tahay qayb muhiim u ah nolol maalmeedka muwaadiniinta reer Yurub iyo howlahooda dhaqaale ee kala duwan, waana sababta lacagta loogu raadinayo waxay matalaan walxaha sida qoyska, ganacsiga, warshadaha iyo tamarta, iyadoo loo marayo sawirro sida xubnaha qoyska, markab, warshad, iyo dhirta tamarta dabaysha.
2015 lacagta wadaagga ah
Lacagta afraad ee qodobka wadajirka ah waxaa loo bilaabay sabab ahaan sanad-guuradii XNUMXaad ee Midowga Yurub iyadoo tanna loo raadiyay in lagu metelo calanka oo astaan ​​u ah aragtida wadajirka ah ee himilooyinka iyo dhaqanka dadka reer Yurub ee hamigooda ah a mustaqbal wanaagsan.
Sidan oo kale, taajka wareega ee lacagta ayaa waxaad ka arki kartaa laba iyo toban xiddigood oo ka tirsan Midowga Yurub, oo matalaya himilooyinka midnimada, midnimada iyo wada noolaanshaha dadka reer Yurub.
Waxaan dhihi karnaa…
Labada qadaadiic ee lagu xasuusto euro waa shey qaali ah oo aruuriya Waxay leeyihiin qiime sare oo suuq ah oo maalinba maalinta ka dambeysa sare u kacaya, sidaa darteed waxaa si weyn loogu talinayaa in laga faa'iideysto fursadda is tusaysa marka nooc cusub oo lacagtaan ah la soo saaro munaasabadda sannad-guurada dhacdo muhiim ah.
Hadday tahay qadaadiicyada xusuusta ee Spain ama kuwa la bilaabay iyadoo lala kaashanayo Midowga Yurub, Kuwani waa waxyaabo aad u qiimo badan oo qaali ah maaha oo keliya kuwa ururiya shilinka, laakiin sidoo kale qof kasta oo dareemaya in lagu aqoonsan karo dhaqankooda iyo quruumaha ka kooban qaaradda Yurub inteeda kale, maxaa yeelay sannadihii la soo dhaafay, dalalkan waxay awoodeen inay helaan midnimo iyo aqoonsi si dhib yar looga dayan karo qeybaha kale ee adduunka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Siyaasadda dhaqaalaha » Siyaasadda lacagta » Laba qadaadiic oo Euro ah
Samee istiraatiijiyad fure u ah guusha maalgashiga
Qiimayaasha: waxyaabaha ugu waaweyn ee layaabka leh markaad ka soo laabato fasaxa